Isicwangciso sakho seB2B kufuneka siquke i-Ecommerce | Martech Zone
Isicwangciso sakho seB2B kufuneka siquke i-Ecommerce
NgoMvulo, Novemba 2, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ngaba uyazi ukuba sidibanise i Ivenkile yeenkonzo eMartech? Asikukhuthazi itoni (okwangoku) njengoko siqhubeka nokudakumba, kodwa sibona iinkampani ezininzi nangakumbi ezifuna amaxabiso angaphambili kwaye azinqweneli ukusebenza ngokuthe ngqo neqela lokuthengisa ukuze ubhalisele imveliso okanye inkonzo. Kungenxa yoko le nto siyakhe le nxalenye yendawo yethu kwaye siyaqhubeka nokongeza iimveliso kunye neenkonzo-ukusuka uphicotho-zincwadi.
Njengoko i-eCommerce kunye ne-omnichannel yokuthenga amava inyuka iye kulawula kwi-B2C, ziya kufana nokuthenga abathengi. Kuba abathengi be-B2B kunye nabathengi bayabathengi kubomi babo, ulindelo lolwazi, nokulula ukuhamba kumaqonga okuthenga kwidijithali kusebenza kakhulu ekuthengeni izithuthi ezitsha zokudibanisa njengoko kusenza uku-odola izihlangu.
Saxela kwangaphambili lonke ishishini liya kuba lishishini le-eCommerce… Kodwa ayisiyiyo kuphela! I-Accenture Interactive kuvavanyo lwenqanaba eliphezulu kwidijithali nakwiingcali ze-eCommerce kwimibutho emikhulu ye-B2B ukuqonda imeko yokutshintsha yokuthenga kwi-Intanethi.
Inani labathengi be-B2B abathenga iimpahla kwi-intanethi lenyuke ukusuka kuma-57% ngo-2013 ukuya kuma-68% ngo-2014.
I-86% yemibutho ye-B2B ngoku ibonelela ngeendlela zokuthenga kwi-Intanethi.
Kuphela yi-50% yemibutho ye-B2B efumana ngaphezulu kwesishumi sengeniso yabo kwintengiso ye-Intanethi.
Esinye isitshixo koku esikubonileyo kukuba iindwendwe ze-B2B azifuni ukuhlawula ngaphambili zisebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala kwezi ndibano zinkulu. Ayisiyongxaki ngoku ukuba sibonelele ngeendlela zokuhlawula ezininzi, kubandakanya nokwenza i-invoice.
tags: Accentureb2bI-b2b yorhwebokwi-infographicomnichannelukuthengisa kwi-Intanethithengisa iinkonzo kwi-intanethi
Into enukayo ngePlagi yeWordPress Ukulinganisela kunye noPhononongo
Liyintoni ikamva lokuqokelelwa kwedatha?